कमला पुल र नेतृत्वको दायित्व – Apan Dainik
सुविधा थप्दा पनि पाइँदैनन् विषयगत शिक्षक
एमाले अध्यक्षमा ओली निर्वाचित, पाए १९०० मत
एमालेको दसौँ महाधिवेशन : मधेसलाई कति ‘स्पेस’ ?
जनगणनामा देखिएको गम्भीर त्रुटि सच्याउन ज्ञापन, सुपरिवेक्षक र गणकहरुमाथि कारबाही माग
मेस्सीले कीर्तिमानी सातौं पल्ट बेलोन डी’ओर जिते
एसपीमा बढुवा भएका ७ जनाको पदस्थापन [सूचीसहित]
ओमिक्रोनबाट जोगिन सरकारको तयारी : अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेशमा कडाइ
एमाले महाधिवेशन : बादल दोस्रोपटक ब्याटलमा, पूर्वमाओवादीको परीक्षा, को होला आउट ?
कार्यकारी पदबाट आजैबाट बिदा लिन्छु : लालबाबु पण्डित
उत्तरकुमार खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक नियुक्त
कोषको रकममा पहुँचवाला
नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय अधिवेशन, परिवर्तन गर्न काँग्रेस एक ढिक्का हुनपर्छः काँग्रेस कोषाध्यक्ष सितादेवी
प्रदेश २ सरकार : वेबसाइट सञ्चालनका नाममा लाखौँ खर्च, तर अपडेट छैनन् अधिकांश मन्त्रालय
एमाले महाधिवेशन : अध्यक्षसहित विवाद भएका पदमा आज निर्वाचन
कमला पुल र नेतृत्वको दायित्व
अपन दैनिक Follow on Twitter २०७८ कार्तिक ७ गते आईतवार ०७:३६
१० वर्षदेखि निर्माणाधीन कमला नदीको पुल दुई पटक भासिएको छ । संचालनमा नआउँदै पुल भासिएपछि अन्यौलता छाएको छ । २०६८ सालमा पुल निर्माण गर्न करिब २५ करोडमा पप्पु कन्स्ट्रक्शन लुम्बिनी बिल्र्डस जेभीले सम्झौता गरेको थियो । निर्माण १० वर्ष सकिसक्दा पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।
मधेसको लाईफलाईन मानिएको हुलाकी सडक अन्र्तगत सिरहा र धनुषा जिल्ला जोड्ने कमला नदीको पुल निरन्तरको निगरानी र दबाब नहुँदा अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो । त्यसो त निर्माणमा ढिलाई हुँदा हुलाकी सडक संर्घष समितिले १ महिना वढी रिले अनसन गरेको थियो । त्यसपछि पुल निर्माणमा तिव्रता दिएपनि पुलको गुणस्तर र प्राविधिक रुपमा बलियो बनाउने पक्षमा खासै ध्यान नदिएको अहिलेको घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ ।
गत असार १७ मा पुलको सिरहातर्फबाट तेस्रो पाया र त्यसको तीन महिना पछि धनुषातर्फबाट पुलको तेस्रो पाया भासिएको छ । यस घटनाले कमला नदीमा निर्माणधीन पुलमा सुरुदेखि नै लापरबाही गरिएको बुझ्न सकिन्छ । यो अत्यन्त गम्भीर विषय पनि हो । सिरहा र धनुषा जिल्लासँगै हुलाकी सडक भएर यात्रा गर्न चाह्नेका निम्ति दुःखद घटना हो ।
पुलको शिल्यानाश गर्ने क्रममा धनुषाबाट केन्द्रीय राजनीतिमा निकै पकड बनाएका नेताहरुको उपस्थिती रहेको थियो । सिरहा जिल्लाबाट २/३ जनाको सहभागिता मात्रै देखिएको थियो । त्यसबेला चन्दा आतंक हुन नदिन र पुल निर्माण समयमै निर्माण गर्न सहयोग र सहकार्य गर्ने नेताहरुको सार्वजनिक उद्घोष रहेको थियो । त्यो उद्घोष चर्चा बटुल्न मात्रै देखियो । पुल निर्माणलाई नत समयमा सक्ने गरी नेताहरुले भूमिका खेल्न सकेको थियो नत गुणस्तरीयता वारेमा चासो नै व्यक्त भयो । जसले गर्दा पुल उद्घाटन नहुँदै भासिन पुगेको छ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले शुक्रवार पुलको भासिएको वारेमा स्थलगत निरिक्षण गर्न पुगिन् । त्यसवाहेक अन्य राजनीतिक दल र नेतृत्वले खासै वास्ता गरेका छैनन् । यो गम्भीर विषय हो । यसले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु कमला नदीमा १० वर्षदेखि बन्दै गरेको पुलको विषयमा कुनै मतलब नराखेको प्रष्ट हुन्छ । नेतृत्व वर्ग नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पंछिएपछि अवस्था झन् विजोग आउने हो । यसैले अब पनि पुल निर्माण सम्बन्धमा भएका त्रुटी र लापरबाहीको विषयमा छानबीनको निम्ति दबाब दिनुपर्छ । निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पुनः कमला नदीमा पुल निर्माणलाई तिव्रता दिई जनजीविकालाई सहज बनाउन भूमिका नेतृत्ववर्गबाट हुनु जरुरी छ ।
#सिरहा कमला पुल धनुषा
२०७८ मंसिर १३ गते सोमबार ०८:१४
चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिदै प्राधिकरण (सम्पादकीय)
२०७८ कार्तिक २८ गते आईतवार ०६:५६
२०७८ कार्तिक २१ गते आईतवार १३:२४
सडकको खाल्डाखुल्डी कहिले पुड्ने
२०७८ कार्तिक ९ गते मंगलवार ०७:०७
सीमानाका सुचारु (सम्पादकीय)
२०७८ आश्विन १७ गते आईतवार १६:५१
लागुऔषध र समाजिक दायित्व
२०७८ भाद्र ३० गते बुधबार १२:५७
आत्महत्या रोक्न हेल्पलाइन, कसरी गर्छ काम ?
२०७८ भाद्र २६ गते शनिबार १७:२६
ठाकुर समूहमा छलफल : पार्टीको नाम लोसपा राख्ने कि लोजपा ?
२०७८ भाद्र ४ गते शुक्रबार १२:१४
परीक्षा रोक्‍न माग गर्दै पद्‌मकन्या क्याम्पसमा प्रदर्शन, ६ जना पक्राउ
२०७८ श्रावण २६ गते मंगलवार १५:३५
हिडडुल गर्न नसक्नेलाई घरमै पुगेर खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश
२०७८ श्रावण २९ गते शुक्रबार १७:०३
सत्र महिनापछि सीमा-नाकाबाट आवतजावत
२०७८ भाद्र १५ गते मंगलवार १६:३३